PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-01 - Kubafaka ezintweni ukuba ngama-yellow bone
Kubafaka ezintweni ukuba ngama-yellow bone
PHAMBILINI izintokazi ezikhanya ngokwebala bezibizwa ngezitebhutebhu, izipatsha noma amapetshisi emakhaya bebevamise ukuthi zingamakhaladi, kodwa manje sezibizwa ngama-yellow bone. La magama abejwayele ukusetshenziswa yizinsizwa uma zibona intokazi empofu.
Ngokujwayelekile izintokazi ezinebala elikhanyayo noma ezimpofu zivamise ukugqama phakathi kwezinye. ENingizimu Afrika sekubukeka sengathi ama-yellow bone iwona amahle kunabanye. Abanye bazalwe bengama-yellow bone, kodwa abanye basebenzisa imithi nemijovo ezokhanyisa ibala. Namagama ezibizwa ngawo ayahlukahlukana futhi ahamba nesikhathi. Isikhathi esiningi uma intokazi empofu ihamba nezinye ezinebala elizothile iyona evamise ukunakwa kakhulu ngisho yizisheli.
Ukuthi yellow bone kuchaza umuntu wesifazane onsundu kodwa onebala elikhanyayo noma ompofu kakhulu.
Ama-yellow bone abukeka ezihambela wodwa ezintweni eziningi, kangangoba nemithombo yezindaba iqhakambisa wona kunabanye abesifazane abanebala elizothile. Lokhu kufakazelwa yizikhangiso okungaba ezethelevishini noma ezamaphepha lapho uthola ukuthi kuvamise ukuthi kusetshenziswe izintokazi ezimpofu ukukhangisa imikhiqizo ethile.
Ngendlela aqhakanjiswa ngayo amayellow bone sekungathi iyona ndlela yokuchaza umuntu wesifazane omuhle.
Yize kunjalo iningi labesifazane elibizwa ngama-yellow bone alithandi uma lizobizwa ngaleli gama, yize kukhona abathi kuyabasebenzela.
UNomcebo Langa weMagaba Lounge eMpumalanga ngaseHammarsdale ongomunye othi ubizwa nge-yellow bone, uqale wakuchitha ukuthi uyilona naye, kodwa wabuye wavuma ukuthi uyilona.
Uthe ugcine esethole nemisebenzi ngenxa yokuthi abanye abasuke befuna ukuzibika bangosomabhizinisi.
“Isikhathi esiphila kusona manje siyaphoqa ukuthi uhambisane nalama gama. Mina njengentokazi eziqhenyayo ngobuyona angikuzwa kahle ukubizwa ngalo kodwa kuyangijabulisa ukuba yilona. Ngisho izinkampani eziningi ezisebenza ngabantu zifuna izintokazi ezimpofu, ezinhle. Uma ungempofu futhi ungabukeki kahle, kukhona izinkampani okumele ukhohlwe nje ukuyofuna umsebenzi kuzona. Mina ukuba yi-yellow bone okuhambisana nobuhle kuyangisebenzela ebhizinisini. Miningi imisebenzi esengiyitholile ngenxa yendlela engibukeka ngayo,” kusho uNomcebo.
Umlingisi wethelevishini uNomzamo Mbatha naye ongomunye ompofu, ukuchithile ukuthi uyi-yellow bone.
“Angikaze ngibizwe nge-yellow bone futhi angikuthandi lokho. Uma umuntu ehlulwa ukungibiza ngegama lami kungcono avele athule ngoba angikufuni ukubizwa kanjalo,” kusho uNomzamo.
UNhlo Masinga, ongumculi nowaduma esekumaDa Babes, uthe alikho iphutha ngokuba i-yellow bone kwakhe kodwa akumphathi kahle ukubizwa ngalo.
“Mina ngibona kungukungehlisa isithunzi nje ukungibizwa nge-yellow bone. Isikhathi esiningi abantu ababizwa ngama-yellow bone kuba ngamantombazane amancane okungathi awahlelekile. Kwesinye isikhathi amayellow bones athathwa njengabantu abangamaqola nathanda ubumnandi nje kuphela. Yize kunjalo ukuba i-yellow bone kuyangisebenzela ngenxa yokuthi ngiyaqapheleka kuyona yonke indawo lapho ngiqhamuka khona, kodwa inkinga kuba iyona nje eyokuthi kugcina sekunakwe lona kanti nezintokazi ezingama-darkie zinhle. Uma uzoqhamuka kubantu kunguwena wedwa oyi-yellow bone amehlo avele athi njo kuwe. Awube usafisa ngisho nokushelwa ngoba uze ulahle nestebhu ngenxa yokubukwa,” kusho uNhlo osezibiza ngoBabes njengoba esecula eyedwa.
Uthe okubuhlungu abanye abesifazane baze bagcobe iziphaqulo ezibenza babe mpofu okuyinto engeyinhle.
ULinda Mtoba odlala indawo kaZama Ngwenya kwiSibaya kuMzansi Magic uthe, ngenxa yokuthi uzalwe empofu ngeke asho ukuthi kuyamsebenzela yini noma cha.
“Kwakhona ukubizwa nge-yellow bone ngikuthatha njengetemu elingenisile. Kimina akusho lutho. Obekukubi phambilini ngokuba i-yellow bone ukuthi abantu bebekubona njengowesifazane othanda izinto, kodwa manje ngicabanga ukuthi abantu abaningi abasacabangi kanjalo ngawo. Ngisho nengane encane uzwa ibiza i-yellow bone, nasezingomeni eziningi uzwa kuculwa ngama-yellow bone okukhombisa ukuthi yinto esangenisile. Mina ngisho kuculwa ngawo ama-yellow bone nami ngiyacula ngawo, ngoba akukho okungiphatha kabi ngokuba yilona,” kusho uLinda.